Ọnwa ole Saturn: kedu ihe ha bụ, ole ka ha dị na etu esi dị mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa ọ bụla nke mejupụtara ya Usoro anyanwụ o nwere otu Satellites eke ma ọ bụ karịa nke na-agba ya gburugburu. Satellites nwekwara njirimara ndị dị mkpa nke mere ka ha dị iche na ihe ndị ọzọ dị n’eluigwe. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya ọnwa n'ụbọchị Saturn. E nwere ihe karịrị Satellites 50 nke na-agagharị na mbara ala a mana e kewara ha n'ọtụtụ, na-eme ka onye ọ bụla mara ihe niile gbasara ọnwa Saturn.
Kedu ihe bụ ọnwa kachasị mkpa na mbara ụwa a yana kedụ njirimara ha? N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile a n’ụzọ miri emi.
1 Saturn na njirimara ya
2 Ọnwa nke Saturn
3 Otu ìgwè Satell
4 Ọnwa kachasị mkpa nke Saturn
Saturn na njirimara ya
Anyị na-echeta nke ahụ Saturn Ọ bụ mbara ụwa nke Solar System na nso nke Sun. Ọ dị n'etiti mbara ala Jupiter na Uranus. Ọ bụ ụwa nke abụọ kacha elu na mbara igwe. Ọ nwere akụkụ dayameta nke kilomita 120.
Banyere usoro ihe omumu ya, osisi a na-eme ka ọ dị larịị. Skwọsh a bụ n'ihi n'eziokwu na ọsọ ọsọ ya na-agba oke ọsọ. A na-ahụ eriri belt site na Earthwa. Ọ bụ ụwa ka kacha nwee asteroids na-agbagharị gburugburu ya. N'iburu ihe mejupụtara gas na nnukwu helium na hydrogen, ọ bụ nke ndị otu gas. N’ihi ọchịchọ ịmata ihe, aha ya sitere n’aka chi ndị Rom a na-akpọ Saturn.
Ugbu a anyị chetara ntakịrị njirimara nke mbara ụwa Saturn, anyị ga-enyocha ihe niile gbasara ọnwa ya. Ka ọ dị ugbu a, amara ya nwere ọnwa 62. Ndị a bụ ọnwa ole na ole sayensị kwadoola. Satellit niile ị nwere n’ụdị, elu na ebe ha si. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ọtụtụ ọnwa Saturn batara na weghaara ya ozugbo ha batara na mpaghara ndọda ụwa.
Na mbara ala nwere kpakpando nke na-akpagharị gburugburu ya abụghị naanị otu omume igwe ndọda. Nnukwu mbara ala ahụ n’ibu, nke kawanye ike ndọda na-adọta ma nwee ike ịnabata ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke kpakpando ndị na-agba mbara ụwa gburugburu. Anyị na-ekwu okwu banyere nnukwu ihe. Ourwa anyị nwere nanị otu satịlaịtị na-agba anyị gburugburu, ma o nwere ọtụtụ puku iberibe iberibe ihe ndị ikike ndọda na-adọkwa.
A na-akpọ ọnwa Saturn kacha mkpa Titan. O doro anya na ị nụla ya tupu ndụ gị. Ọ bụ ihe kachasị mkpa n'ihi na ọ bụ ya kachasị ukwuu na sistemu Saturn. Na mgbakwunye, ọ bụ satịlaịtị nke abụọ kachasị na mbara igwe niile mgbe Ganymede (ọ bụ otu n'ime Satellites nke mbara ụwa Jupiter). Titan na-adị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụ naanị ahụ dị na mbara igwe ebe enwere ego mmiri mmiri.
A na-ekewa ezumike nke ọnwa Saturn dị iche iche dị iche iche, na-adabere n'àgwà ha.
Otu ìgwè Satell
Anyị ga-amata ọdịiche dị iche iche dị na nkewa Satellites dị iche iche nke mbara ụwa Saturn. A maara ụdị Satelline a dị ka usoro Saturnine ma kewaa ha dịka njirimara ha si dị. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Titan. Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ satịlaịtị kachasị mkpa n’ibu. O buru ibu nke na o yiri nke ụwa. O siri ike karịa mbara ala Mercury na nha. Mgbidi ya dị kilomita 5.150 ma ọ pụtara maka ikuku ya. Ọ nwere ikuku dị oke ikuku ma ọ bụ naanị ya nwere ndekọ.
Oyi kpọnwụrụ ọkara Satellites. Satellite ndị a nwere nha ọkọlọtọ. Dị ka aha ha na-egosi, ha bụ Satellites kpuchie site na oyi akwa nke ice na dị iche iche craters. Achọpụtara Satellites ndị a tupu ụfọdụ n'ime njem ndị ejiri telescopes mee. Fọdụ n’ime ihe ndị kachasị mkpa bụ: Tethys, Dione, Rhea, Hyperion na Iapetus.
Satellites mgbanaka. Satellites mgbanaka bụ ndị na-agagharị n'ime mgbaaka Saturn.
Satellites satịlaịtị. Ọ bụ banyere ndị na-abụghị ndị yiri mgbaaka. N'ihi orbit ya, ọ nwere ike inye aka ịhazi na ịhazigharị ihe, dị ka a ga - asị na ha bụ ndị ọzụzụ atụrụ. N'ime ndị kacha mara amara anyị nwere mgbanaka F, Pandora na Prometheus.
Satjan Satellites. Satellites ndị a na-agba otu ebe dị anya site na Saturn dị ka nnukwu Satellites. Ha na-abụkarị ihe dị ka 60 degrees n'ihu ya ma ọ bụ n'azụ ya. Anyị na-achọta Helena na Pollux, n'etiti ndị a ma ama.
Satellites Coorbital. Ndị a bụ ndị nwere otu akara ahụ ha na-agba. Nke a na-eme ha satellit na-eme ihe ma na-agagharị n'ụzọ nke na ha enweghị ike ịlụ ọgụ.
Satellites na-ezighi ezi. Ọ bụ nnukwu ìgwè Satellites, ọ bụ ezie na ọ dị anya na Saturn. Ha nọ n’ime ebe ndọda gị.
Obere satellites dị ala. Ha niile bụ ndị nọ n’etiti Mimas ice cream na Enceladus ice cream. N’etiti mbara igwe satịlaịtị abụọ a bụ ndị niile dị ala.
Ọnwa kachasị mkpa nke Saturn
Ka anyị lelee ọnwa ndị kachasị mkpa nke Saturn. Titan kachasị mkpa n’ihi na ọ ka ibu ma mejupụta nnukwu hydrocarbons na hydrogen. Nke a na-eme ka ha nweta ụcha na-acha odo odo. Ọ dị ihe dịka kilomita 1.222.000 site na mbara ụwa wee mezue njem ya gburugburu ụwa gị kwa ụbọchị iri na isii.
Ka anyị gaba na Rea. Ọ bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa Satellites nke Saturn. Ọ bụ akụkụ nke ọkara ice creams. Mgbidi ya dị kilomita 1.530 ma ọ dị nso. Echere na etiti ya bụ okwute na nnukwu mmiri.
N'ikpeazụ, Enceladus ọ bụ ọkwa nke isii n'etiti Satellites kasịnụ. Ọ nwere dayameta nke dị kilomita 500. O so n’otu n’ime Satellites na-ajụ oyi. Akpụrụ ice ya na-enye ya agba ọcha ka ọ na-egosipụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nke ìhè anyanwụ ọ na-enweta.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ọnwa Saturn ma chọpụta karịa mbara ala a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Ọnwa nke Saturn